CODSIYADA ISKU-DHAFKA AH EE ANDROID - ANDROID - 2020
Ugu Weyn Ee Android
Codsiyada isku-dhafka ah ee Android
Shaqada ugu muhiimsan ee Skype waa inaad wicitaanada u dirto dadka isticmaala. Waxay noqon karaan labadaba cod iyo video. Hase yeeshee, waxaa jira xaalado marka wicitaanku uu ku fashilmay, qofkuna ma la xiriiri karo qofka saxda ah. Aynu ogaanno sababaha astaankani, iyo sidoo kale waxa la samaynayo haddii uusan Skype ku xirnayn macaamiishiisa.
Haddii aadan gaari karin qof gaar ah, hubi xaaladiisa ka hor intaadan qaadin ficilo kale. Waxaad ka heli kartaa xaalka icon, kaas oo ku yaala geeska bidix ee hoose ee user avatar ee liiska xiriirka. Haddii aad hayso cursorka ku yaal icon, ka dib, xitaa adoon ogeyn micnaha, waxaad akhrin kartaa waxa uu macnaheedu yahay.
Haddii macaamiishu ay "status" ku xiran tahay, markaa tani macnaheedu waa in midkale oo Skype ah la soo daayo, ama uu sharcigan u dejiyay naftiisa. Si kastaba ha ahaatee, ma yeeri kartid isaga illaa inta isticmaalaha uu beddelayo.
Sidoo kale, xaaladda "xayeysiis" ayaa lagu soo bandhigi karaa dadka isticmaala kuwa ku qoran liiska madow. Xaaladdan, waxa kale oo aan suurtogal aheyn in laga helo telefanka, waxna lagama qaban karo.
Laakiin, haddii uu isticmaaluhu leeyahay xaalad ka duwan, sidoo kale maahan xaqiiqo ah inaad awoodi doonto inaad soo dhex gasho, maadaama uu si fudud uga fogaan karo kombiyuutarka, ama uusan telefoonka soo qaadin. Gaar ahaan, suurtogalnimada natiijadan oo kale waxay suurtogal ka dhigaysaa xaaladda "Out of place" iyo "Ha buuqin." Heerka ugu sarreeya ee aad ku hesho, iyada oo isticmaaluhu isticmaalayo telefoonka, oo leh xaaladda "Online".
Sidoo kale, waxaa suurtagal ah in aad leedahay dhibaatooyin isgaarsiineed. Xaaladdan, ma heli kartid adiga oo aan isticmaali karin oo kaliya adeeg gaar ah, laakiin dhammaan dadka intiisa kale. Habka ugu fudud ee lagu ogaan karo haddii tani dhab ahaantii tahay dhibaatada isgaadhsiintu waa in si fudud loo furo browserka oo isku day inaad tagto goob kasta.
Haddii aad ku guuldareysatid inaad sidaan sameyso, ka dibna raadi dhibaatada aan ku lahayn Skype, maadaama ay been ka tahay wax kale. Tani waxay noqon kartaa isku-xirka internet-ka, sababtoo ah lacag-bixinta, cillad dhinaca dhinaca bixiyaha ah, burburinta qalabkaaga, qalabka saxda ah ee nidaamka hawlgalka, iwm. Mid kasta oo ka mid ah dhibaatooyinka kor ku xusan waxay leeyihiin xal u gaar ah, taas oo u baahan in ay u qaadaan mawduuc gaar ah, laakiin, dhab ahaantii, dhibaatooyinkan waxay leeyihiin xiriir aad u fog Skype.
Sidoo kale, hubi xawaaraha isku-xirka. Xaqiiqdu waxay tahay in xawaaraha isku xiran ee aad u hooseeya, Skype si fudud u garaacdo wicitaanada. Xawaaraha isku xirka waxaa lagu baari karaa kheyraadka takhasuska leh. Waxaa jira adeegyo badan oo kala duwan, waana mid aad u fudud in la helo. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu wado gawaarida raadinta u dhiganta.
Haddii xawaaraha hoose ee internetka uu yahay dhacdo hal mar ah, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa inta xiriirku dib u soo celiyo. Haddii xawaarahaas hooseeyo ay sabab u tahay shuruudaha adeegaaga, markaa si aad awood ugu yeelatid inaad la xiriirto Skype oo aad wacdid, waa inaad u bedeshaa qorshaha xogta degdegga ah, ama bedelida bixiyaha guud, ama ku xiro internetka.
Laakiin, haddii aad ogaatay in wax walba ay ku fiican yihiin internetka, laakiin ma aad heli kartid mid ka mid ah isticmaalayaasha "Status", ka dibna, kiiskan, waxaa suurtogal ah in uu ku guuldareysto Skype. Si tan loo hubiyo, la xiriir macaamiisha farsameed ee "Echo" adigoo riixaya sheyga "Wac" ee macnaha guud. Xiriirintiisa waxaa lagu dhejin karaa Skype. Haddii aysan jirin wax xidhiidh ah, iyadoo ay joogaan xawaaraha internetka caadiga ah, tani waxay macnaheedu noqon kartaa in dhibaatada ay ku jirto barnaamijka Skype.
Haddii aad haysatid nuqul ka mid ah codsiga, kadibna u cusbooneysii ugu dambeyntii. Laakiin, xitaa haddii aad isticmaasho nuqulkii ugu danbeeyay, waxaa laga yaabaa inaad dib u soo celiso barnaamijka caawin doono.
Sidoo kale, waxay kaa caawin kartaa xallinta dhibaatada iyada oo aan awood u lahayn in ay wacdo meel kasta, hagaajinta dejinta. Marka hore, waxaan xirnaa Skype.
Waxaan kuqoran Win + R isku-dhafka kumbuyuutarka. Daaqada Burburka ee muuqata, geli amarka% appdata%.
Tag buugga, beddel magaca magaca faylka Skype si kasta oo kale.
Waxaan bilaabeynaa Skype. Haddii dhibaatada la xallilo, waxaan u wareejineynaa faylka main.db ee ka koobnaanta qaybta cusub ee loo yaqaan 'folder'. Haddii dhibaatadu ay sii socoto, macnaheedu waa in sababteedu aysan aheyn goobaha Skype. Kiiskan, tirtir xarafka cusub ee la sameeyay, oo ku soo celi magaca hore ee galka hore.
Mid ka mid ah sababaha aadan u wici karin cidna waa infakshan feyruuska ah ee kombiyuutarkaaga. Haddii shaki laga shakisan yahay, waa in lagu sawiraa antivirus.
Antivirus iyo dab-damisyada
Isla mar ahaantaana, barnaamijyada anti-virus ama ammaanka duurjoogta ayaa laga yaabaa inay xannibaan qaar ka mid ah hawlaha Skype, oo ay ku jiraan wacitaanka wicitaanada. Xaaladdan, iskuday in aad si ku meel gaar ah u joojiso qalabkan badbaadinta kombiyuutarka oo tijaabi wicitaanka Skype.
Haddii aad ka gudbi karto, waxay macnaheedu tahay in dhibaatadu ay tahay in la sameeyo biilasha antivirus. Isku day inaad ku darto Skype si aad uga baxdid goobahooda. Haddii dhibaatada aan lagu xallin karin habkan, markaa si aad wici karto wicitaanada caadiga ah ee Skype, waa inaad beddeshaa codsigaaga fayruuska ah ee barnaamijka isku midka ah.
Sida aad arki karto, awood la'aanta inaad u yeerto qof kale oo Skype ah waxaa sababi kara sababo badan. Isku day, ugu horreyntii, si aad u xaqiijisid dhinaca midka dhibaatadu tahay: qof kale, adeeg bixiye, habka hawlgalka, ama goobaha Skype. Ka dib markaad ku xirto isha dhibaatada, iskuday inaad xalliso mid ka mid ah hababka ku haboon ee looga takhalusi karo hababka sare lagu sharaxay.
Nidaamka Isku xirka ee VirtualBox
Fix qalab uTorrent "mug hore hore looma dhejin"
5 codsiyo lagu helo waxyaabo xiiso leh
Bishii Abriil 2015, version cusub ee barnaamijka bilaashka ah ee dib u helidda PhotoRec ayaa la sii daayay, kaas oo aan horey u soo qoray hal sano iyo badh ka hor waxaana la yaabay waxtarka barnaamijkan marka dib loo soo celiyo faylasha iyo macluumaadka laga tirtiray qalabka loo yaqaan formatted. Sidoo kale qodobkan ayaan si qalad ah u dejiyay barnaamijkan sida loogu talagalay dib u soo kabashada sawirka: tani maaha mid sidaas ah, waxay ku caawin doontaa in ay soo celiso dhammaan noocyada faylalka caadiga ah. Read More
Waa maxay mrt.exe
Dareemida furaha muhiimka ah ee Windows 7
https://termotools.com so.termotools.com © Android 2020